Matipi ekutora katsi | Noti Katsi
Kugamuchira mhuka inzira yakakurudzirwa nguva dzese patinoda kuwedzera mhuri, nekuti kwete chete isu tinobatsira iyo imbwa diki yatinoenda nayo kumba asi isu tichaitirawo nzvimbo yeumwe ari kurarama - kana asi, akararama zvakaipa - pa mugwagwa. Asi kuti chive chiitiko chakanaka kwazvo kune ese mapato, ini ndoda kukupa matipi ekutora katsi.
Sei? Nekuti zvinowanzoitika kuti iyi mhuka diki inogamuchirwa uye, kana yapedza kukura, inodzoka zvakare kune pekuvanda kana kumugwagwa. Izvo zvakakosha kuti ugare uchifunga kuti, kubva panguva yekutanga yatinosaina chibvumirano chekurera, tinowana kuzvipira kukati iyo isingatombofanira kutyorwa, nekuda kwechikonzero chakareruka chekuti katsi ihasha ine manzwiro.
1 Funga kana uchikwanisa kumuchengeta
2 Gadzirira imba usati wasvika
3 Cherechedza usati wafunga nezvazvo
Funga kana uchikwanisa kumuchengeta
Katsi dzinogona kurarama avhareji yemakore makumi maviri. Izvo hazvigoneke kuziva kuti tichava kupi uye sei isu mumakore makumi maviri, asi ... dai taifanira kunetseka pamusoro peizvozvo zvirokwazvo hapana chinhu chatinoziva chingave chakafanana. Kana nhengo nyowani yemunhu ikauya mumhuri, vabereki vanoita zvese zvavanogona uye nezvimwe kumuchengeta achitarisirwa zvakanaka. Nekusvika kwekatsi iwe unofanirwa kuita zvakafanana.
Kana iwe uchida katsi, kana iwe uchikwanisa kutarisira iyo diki, kana iwe uchikwanisa kumuendesa iye kuna vet pese pese paanoda iye, saka unogona kufunga nezve kutora katsi.
Gadzirira imba usati wasvika
Kittens dzakanyanyisa misikanzwa. Ichokwadi kuti vanopedza maawa - vangangoita gumi nemasere - vakarara, asi panguva yezuva rose ivo vanomhanya, vanotamba, vanoita zvakaipa ... Vane simba rakawanda, uye vachapisa iro simba kuita chero chinhu. Saka, paunoenda kunotora furry yako unofanirwa kunge wakagadzirira imba kare, nemakwesha, matoyi, uyezve nezvose zvaachazoda: mubhedha, chinwiwa, feeder uye nehutsanana tireyi.
Cherechedza usati wafunga nezvazvo
Usati wasarudza pane imwe kunyanya, ndinokurudzira kuti iwe upedze chinguva nekiti dzese. Saka iwe unogona kuona maitiro avanozvibata, hunhu hwavanazvo, zvavanofunga nezvevanhu... Nenzira iyi, zvichave nyore kwazvo kuti utore katsi iyo yaunoda kwazvo ... kana iyo yaunoda kwazvo, iyo inogonawo kuitika 🙂.
Kamwe pamba, iwe uchafanirwa chete kuita chinhu chimwe, zvakanaka, zviviri: kumutarisira uye kunakidzwa nekambani yake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Kugamuchirwa » Matipi ekutora katsi